Otu ụbọchị na Chernobyl nuklia ike osisi - Nkwadebe | Akụkọ Njem
Chernobyl, otu ụbọchị na nuklia ike osisi (akụkụ m) - Nkwadebe
Anyị niile maara akụkọ mwute nke Chernobyl (Ukraine), ụlọ ọrụ nuklia ya na ndị bi gburugburu ya.
Ma, ọ dịtụla mgbe ị chere ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịga leta ma ọ bụ mee otu ụdị njem nleta? Ajụrụ m onwe m na azịza ya bụ ee, nwere ike ịga leta.
Ogwe osisi nuklia na Prypiat (obodo ghost, nke mbu nke ndi Soviet) ọ bụ naanị awa 2 ụgbọala si Kiev, isi obodo nke mba ahụ, ihe dị ka 100 kilomita n'akụkụ ugwu, na-esote ókèala na Belarus.
Afọ 30 mgbe ọdachi ahụ gasịrị, ọkwa nke nje nuklia dị oke elu. Akụkụ abụọ nke 2 kilomita (ebe ọ na-agaghị ekwe omume ibi) na 10 kilomita (ebe a naghị atụ aro ibi) gburugburu etiti ahụ. Somefọdụ ndị bi n'ime ụlọ nchebe a.
Gọọmentị Ukraine nyere ụfọdụ ụlọ ọrụ ohere ịme njem na nleta na mpaghara Chernobyl mwepu. N'otu ụbọchị ahụ ị nwere ike ịga leta ma laghachi.
Ministri nke Ahụike ga-edebanye aha ndị njem niile na-enweta ya iji chịkwaa onye ọ bụla na-abanye ma na-apụ.
1 Kedu otu esi aga na ihe ị ga-ahụ na mpaghara mwepu?
2 Ọ dị mma ịga Chernobyl?
3 Ọ bara uru ịga?
Kedu otu esi aga na ihe ị ga-ahụ na mpaghara mwepu?
Es amanyere bụ iwu iku onye gị n'ụlọnga ma soro onye ntuziaka puru iche. Ha na-edozi gị akwụkwọ niile dị mkpa maka gị.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye njem zuru ezu nke ụbọchị 1 ma ọ bụ ụbọchị 2, na-ehi ụra na ụlọ mbikọ nke obodo Chernobyl. Zọ ahụ dị nnọọ ka ụlọ ọrụ ọzọ.
Nhọrọ nloghachi site na Kiev n'otu ụbọchị na-agbaso ụzọ na-esonụ:
Banye na mpaghara mwepu, njikwa nuklia na ndebanye aha na ntinye ego 30Km na 10Km pụọ. Mgbe ị na-apụ, njikwa nyocha nuklia.
Utezọ njem gafere kpamkpam obodo. Tupu ọdachi ahụ enwere mmadụ 4000, ugbu a ọ dịghị onye.
Gaa na obodo Chernobyl, ndị a na-eji ígwè ọrụ iji mee ka ọ ghara imetọ ihe na ihe ncheta. Ndị injinia na ndị agha bi ebe a na ọrụ ndị na-ahụ maka ikpocha mpaghara ahụ kpamkpam.
Rancezọ mbata nke ebe a na-elekọta ụmụaka nke gbahapụrụ agbahapụ kpamkpam. Nwere ike ịme akụkụ a nke njegharị maka minit 30 n'ihi ihe egwu ahụike.
Duga-3. Nnukwu radar na radar Soviet mgbochi-ngwa ogu ana-atu atu n'etiti ọhịa.
Chernobyl Nuclear Power Plant: gaa site na mpụga nke ọ bụla n'ime ihe ndozi ya, gụnyere nọmba 4, nke kpatara ọdachi ahụ. Gị nke kachasị nke 5 ma ọ bụ 10 nkeji, naanị iji gbadaa ma see foto 4.
Osisi Uhie. Oké ọhịa n'ihi na ọ dị nso na ụlọ ọrụ nuklia nuklia gbanwere uhie. N'iburu ọkwa mmetọ oke ọhịa a, ị nweghị ike ịpasa ụgbọ, hụ ngwa ngwa ma na-agagharị.
Pripyat, obodo gbahapụrụ agbahapụ. Utezọ nke ihe dịka 2 ma ọ bụ 3 awa site na obodo mpako Soviet. Obodo nke oge ahụ bu otu nke kachasi nke ohuru na nke di na Soviet Union. O nwere mmadụ 40000.
Nri n'ụlọ nri Chernobyl, naanị ebe ị nwere ike iri nri na ihi ụra.
Nhọrọ nke ịrahụ ụra ebe ahụ ma mee njem mmụta ụbọchị 2 na-atụgharị uche n'ihe niile akọwara n'elu mana na nkọwa zuru ezu. Nke ahụ bụ ịsị, ma na obodo Chernobyl na na Pripyat, a na-eleta isi ihe nnọchianya kachasị na nke ahụ ka dị. Na mgbakwunye, a na-emekwu nkwụsị n'ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ n'ụzọ.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịbanye maka njem ụbọchị 2. Anyị na-esi na Kiev na-aga ma anyị chere na o zuola. Site na elekere 2 ma ọ bụ 3 na Pripyat ị ga - ahụ ma hụ etu ọdachi niile si dị. Nye oge zuru ezu iji gaa na isi ihe kachasị mkpa.
Ọ dị mma ịga Chernobyl?
N’ezie, nke a ga-abụ ajụjụ nke abụọ ị ga-ajụ na nke m jụkwara onwe m mgbe m chere echiche ịga. Azịza ya bụ: ee, ma.
Gọọmentị Ukraine kwenyere na ọ ga-aga njem ọ bụla na mpaghara ahụ n'agbanyeghị mmetọ mmetọ ka na-apụta ìhè. Rozọ niile gụnyere ụzọ dịkarịsịrị oke na akara. A na-atụ aro ya na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịhapụ ụzọ nke ndu na-eso n'oge ọ bụla. Enwere mpaghara ebe ị nwere ike ịbụ naanị nkeji ise na ebe ọnweghị mmetọ. Ndị ndu a na-ebu mita mmetọ nuklia n'elu oge niile iji hụ nchekwa nke ndị njem nleta.
Na nlele ọ bụla A na-eme njikwa ahụike na mmetọ, ma mgbe ị na-abanye ma na-apụ. Na tiori, ekwesighi ka ekpughe mmadụ ọ bụla ruo ụbọchị 1 ma ọ bụ abụọ. N'ihe banyere ịchọpụta akụkụ ahụ na redioactivity, anyị na-aga n'ihu iji mezue nhicha na mmetọ.
Ana m akwado jee na uwe ochie na ugwu ma obu egwuregwu. Ọ bụ ebe kpam kpam, unyi na osisi. Akpụkpọ ụkwụ ga-eru unyi (na ikekwe mmeru). Yabụ, ọ kacha mma iji akwa anyị nwere ike ịtọghe ma ọ bụrụ na enwee nsogbu.
Iji kpochapụ obi abụọ, ụlọ ọrụ ahụ na-akọwa na ugbu a njem njem ụgbọelu nke 10 na-emetọ emetọ na ọkwa nuklia maka ahụ karịa ụbọchị 1 na Chernobyl. N'ọnọdụ ọ bụla, agaghị m aga mpaghara mwepu ọtụtụ oge.
Ọ bara uru ịga?
Toga Chernobyl bụ ụdị njem nleta pụrụ iche.
Ọ bụ njem mmụta na-emetụta ọtụtụ, enwere m ike ikwu nke ahụ onweghi ihe dika ya n’ebe ozo n’uwa. Na-ejedebe ụyọkọ ụyọkọ nke obi mwute, n'ihi akụkọ dị n'azụ ya, ọ na-eju gị anya site na ihe niile ị hụrụ.
Echere m na ọ bụ a ezigbo nhọrọ iji gaa mpaghara ebe ọkụ nuklia ma ọ bụrụ na ị gaa Kiev. Isi obodo ahụ nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye, mana n'ime awa 2 site na ụgbọ ala ị nwere ike ịme njem njem a pụrụ iche.
N'isiokwu na-esonụ, m ga-akọwapụta ahụmịhe m na ihe niile m hụrụ, yana nnukwu onyonyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Kiev » Chernobyl, otu ụbọchị na nuklia ike osisi (akụkụ m) - Nkwadebe
Ebe aga-eme ememme Afọ Ọhụrụ nke 2015